ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ ndị na -emepụta, ndị na -ebubata ya - China vetiinary medicine Factory
Ọgwụ Dexamethasone 0.4%
Ọgwụ Dexamethasone 0.4% MGBE: Nwere kwa ml: ntọala Dexamethasone ………. 4 mg. Ihe mgbaze mgbasa ozi …………………… .1 ml. Nkọwa: Dexamethasone bụ glucocorticosteroid nwere ọgwụ mgbochi siri ike, mgbochi nfụkasị na gluconeogenetic. Nkọwa: Acetone anaemia, allergies, ogbu na nkwonkwo, bursitis, ujo, na tendovaginitis n'ime ụmụ ehi, nwamba, ehi, nkịta, ewu, atụrụ na ezì. MGBE ECHICHE Ọ gwụla ma achọrọ ime ma ọ bụ ịkpa oke n'oge, nchịkwa Glucortin-20 n'oge ikpeazụ ...
Florfenicol 30% ọgwụ
Ọgwụ Florfenicol 30% MGBE: Nwere kwa ml.: Florfenicol …………… 300 mg. Ihe nnyemaaka mgbasa ozi ………… .1 ml. Nkọwa: Florfenicol bụ ọgwụ sịntetịkị nke na-arụ ọrụ nke ọma megide ọtụtụ nje nje gram-positive na gram-adịghị mma dịpụrụ iche na anụ ụlọ. Florfenicol na -arụ ọrụ site na igbochi njikọ protein na ọkwa ribosomal ma bụrụ bacteriostatic. Nnwale ụlọ nyocha egosila na florfenicol na -arụ ọrụ megide nje na -ebutekarị nje na -etinye aka na ...
Iron Dextran 20% ntụtụ
Dextran Iron 20% MGBE: O nwere otu ml .: Iron (dị ka dextran ígwè) ………………………………………… .. 200 mg. Vitamin B12, cyanocobalamin …………………………… 200 ug ihe mgbaze. …………………………………………………………………… 1 ml. NKỌWA: A na -eji dextran ígwè eme ihe maka prophylaxis ...